आफै संगठीत हुन सके मात्रै महिलाका माग तथा मुद्दाहरुको सुनुवाई हुन्छ । जुनु गुरुङ, क्षेत्रीय महिला संयोजक, एसिया प्यसिफिक, एनआरएनए - Fonij Korea
आफै संगठीत हुन सके मात्रै महिलाका माग तथा मुद्दाहरुको सुनुवाई हुन्छ । जुनु गुरुङ, क्षेत्रीय महिला संयोजक, एसिया प्यसिफिक, एनआरएनए
लेखक: फोनिज कोरिया संवादाता	| प्रकाशीत मिति: June 27, 2019
गैरआवासीय नेपाली संघको अभियानमा अहिले महिलाहरुको उपस्थिति र सक्रियता बढिरहेको छ । यो अभियानमा सक्रिय भएर लाग्ने महिलाको नाममा अग्रपंक्तिमा आउने नामहरुमा एउटा नाम हो, जुनु गुरुङ । दक्षिण कोरियामा रहेर वमन फर वमनको सफल नेतृत्व निभाएकी गुरुङ अहिले एनआरएनएको एसिया प्यासिफिक महिला संयोजकको भूमिकामा छिन्। एसिया प्यासिफिकमा रहेका देशका एनआरएनएमा छुट्टा–छुट्टै महिला विभाग गठन गर्दै यही जुलाई ६,७ मा दोस्रो एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय महिला भेला हुँदैछ । महिलाहरुको एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय भेलाले ‘महिला शसक्तीकरण एकता,शिक्षा,स्वास्थ्य, महिला लगनी मुखी बनाउने उदेश्यको सन्देश दिने जनाइएको छ । एसिया प्यासिफिक देशमा रहेका नेपाली महिलाहरुको अधिकार रक्षाका लागि एनआरएनएको भूमिका र नेपाल सरकारको चासो बढाउन महिला भेला सफल हुने गुरुङको दावी छ । एसिया प्यासिफिक देशमा रहेका महिलाहरुको विषयमा क्षेत्रीय महिला संयोजक जुनु गुरुङसँग गरेको छोटो कुराकानी :
तपाईहरुले म्यानमारमा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय महिला भेला आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो हुँदैछ भेला ?
हो, हामीले पहिलो पटक महिलाहरुको एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय भेला हङकङमा भब्यताका साथ सम्पन्न पछि दोस्रो महिला भेला पनि म्यानमारमा आयोजना गर्दै छौ । हाम्रो मूख्य उदेश्य भनेकै ‘महिला शसक्तीकरण र एकता’ हो । एसिया प्यासिफिकमा रहेका महिलाहरुलाई आफैं लगानी गरेर स्वाभलम्वी र आत्मनिर्भर बन्नु पर्छ भन्ने अभिप्राय भेलाको रहनेछ । त्यसैगरी एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका महिलाहरुको समस्या र समाधानका विषयमा एनआरएन र नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम भेलाले गर्दछ । एसिया प्यासिफकका देशमा रहेका एनआरएन महिला संगठनको प्रगति विवरण प्रस्तुत हुनुका साथै भावी कार्यक्रमहरु पनि तय हुने छन् ।
एसिया प्यासिफिक भित्रको महिला कोर्डिनेटरहरुको बिचमा मैले एउटा ग्रुप बनाएको छु । यो ग्रुपमा हाम्रो प्रत्येक महिना मिटिङ हुन्छ । त्यही मिटिङबाट नै पारित भएर जापान, हङकङ, मकाउ, सिंगापुर, थाईल्याण्डमा ,मलेसिया, सिंगापुर, कोरिया, चिन,म्यानमारमा महिला फोरमको गठन भइसकेको छ ।
प्रत्येक देशको एन आर एन महिला संयोजक हरूको नाम के के हुन ?
जापान =सबिता श्रेष्ठ
मकाउ = सर्मिला राई
सिंगापुर = तपस्या रेग्मी
मलेसिया =शान्ति थापा
कोरिया = कमला गुरुङ
चिन = रंजिता आचार्य
म्यानमार= डा•मिना देबी सापकोटा
विभिन्न कार्यक्रमहरु जस्तै तीज लगायत अरु राम्रा कार्यक्रमहरु पनि गरिसकेका छौ र अरु देशहरुमा पनि संगठन बिस्तार गर्ने एउटा पोजिटिभ सन्देश आएको छ ।
एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा महिलाहरुको प्रमुख समस्या र पुरुषका समस्या उस्ताउस्तै छन् । तर, पुरुष भन्दा महिला केही मात्रामा पीडित भएको पाइन्छ । चाहे त्यो मालिकबाट होस् चाहे काम गर्ने ठाउँमा नै । हालसालैको समस्याको कुरा गर्दा महिलाहरु अलि बढी बिरामी हुने, विदेशी वा कोरियनसँग बिहे गरेर आएर विभिन्न देशमा गएर बेरोजगार बन्ने, त्यस्तो किसिमको समस्याहरु छ । यसलाई हामी विभिन्न कार्यक्रममार्फत अभियान चलाएर एसिया प्यासिफिक भित्रको एनआरएनएमा महिलालाई सशक्त र शिक्षित बनाउने, संस्थागत बनाउने किसिमको अभियान चलाउनेछौ । सुरुमा संगठीत भएपछि अभियान थाल्नेछौ ।
हालसालै हाम्रो आईसिसि महिला फोरमबाट एउटा अभियान चलाउन खोजिरहेका छौं । युरोप, अमेरिकातिर त्यो सुरु पनि भैसकेको छ र हामीले एसिया प्यासिफिक क्षेत्र भित्र पनि केही समय भित्रै सुरु गर्छौ ।